अर्जेन्टिनाको भन्सार | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | अर्जेन्टिना, संस्कृति
अर्जेन्टिना यो मूलतः एक हो आप्रवासीहरुको देश, यद्यपि यसको भूगोल यति विस्तृत छ कि तपाई कहाँ जानुहुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दै तपाई रूढीको सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ जुन युरोपियन आप्रवासनबाट नभई स्वदेशी तथा लटिन अमेरिकी छिमेकीबाट आउँदछ।
यसैले, अर्जेन्टिनीको चलन फरक छ र तपाई पक्कै पाउनुहुनेछ तपाईलाई सबैभन्दा मन पर्ने ग्यास्ट्रोनोमी, मिलनसार वा व्यवहारको हिसाबले। के तपाईं अर्जेन्टिना जाँदै हुनुहुन्छ? यो एक राम्रो समय हो यदि तपाईं युरोपियन हुनुहुन्छ किनभने यो अन्तिम सरकारको साथ पेसोको अवमूल्यन ठूलो भएको छ र परिवर्तनले तपाईंलाई राम्रोसँग समर्थन गर्दछ।
1 अर्जेन्टिना ग्यास्ट्रोनोमिक सीमा शुल्क
2 अर्जेन्टिनी सामाजिक रीतिथिति
अर्जेन्टिना ग्यास्ट्रोनोमिक सीमा शुल्क
खाना पहिले। त्यहाँ केहि खानाहरू छन् जुन अर्जेन्टिनाको विशिष्ट हो र यसलाई यसको ट्रेडमार्क मान्न सकिन्छ, उनीहरू यस क्षेत्रका अन्य देशहरूमा खपत गर्दा पनि। म बोल्छु asado, dulce de leche र empanadas.
अर्जेन्टिना जहिले पनि कृषि निर्यात गर्ने देश भएको छ, र गम्भीर औद्योगिकरणको अभाव विकासको लागि यसको मुख्य समस्या भएको छ, त्यसैले गाई, गहुँ र अब सोयाबीनले यसका धनी चिल्लो पाम्पालाई लोकप्रिय बनायो। मासु स्वादिष्ट छ, धेरै राम्रो गुणको, ठीक किनभने चराउनेहरूको कारणले, यस्तै त्यहाँ कुनै अर्जेन्टिना छैन जो हप्तामा कम्तिमा पनि एक पटक Asado तैयार गर्दैन। क्लासिक परिवार वा साथीहरूको साथ सप्ताहन्त हो।
यहाँ, गोमांसको देशको स्थानका आधारमा बिभिन्न कट र बिभिन्न नामहरू छन्। कम्मर, भुनीको स्ट्रिप, नितंब, रम्प, मताम्ब्रे। चोरिजो रोटी, चोरिपन, रगत सॉसेजको साथ रोटी, मोरसिपन। अचुरास अर्जेन्टिना ग्रिलबाट हराउन सक्दैन: सॉसेज, गिजार्ड, मिर्गौला, रगत सॉसेज, चिन्चुलिनहरू (आन्द्रा) एक राम्रो बार्बेक्यु मास्टर समयको साथ पेशेवर बन्छन्, बार्बेक्यु पछि बार्बेक्यु, चुनौती पछि चुनौती, ताकि यदि तपाइँ एकसँग भेट्न पर्याप्त भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने तपाइँ तपाइँको जीवनको सबै भन्दा राम्रो बारबेक खान्नुहुनेछ।
धेरै मासु संग के छ? ठीक छ, सलाद वा चिप्स संग, दिनको रोटी, स्वादिष्ट चटनी को एक जोडी (चिमिचुरी र क्रियोल सॉस), र एक हेपाटोप्रोटेक्टर लिनुहोस् र त्यसपछि झपकीको लागि जानुहोस् र डाइजेस्ट। तालुको लागि भोज!
ग्यास्ट्रोनोमिक परम्पराको अर्को हो कारमेल, दूध र चिनीबाट बनेको मिठो गाढा खैरो र धेरै मीठो छ। अर्जेन्टिनालाई यो मन पर्छ र त्यहाँ कुनै क्यान्डी वा पेस्ट्री छैन जुन dulce de leche छैन।
को चालानहरूउदाहरण को लागी, बेकरीहरू बनाउने र मिठो मीठो आटा युनिट वा दर्जनौं द्वारा बेचिन्छ, धेरै प्रकारका डल्से दे लेचेसँग हुन्छन् र ती नै आइस क्रिम हुन् र मिठाई (alfajores, क्यान्डी, चकलेटहरू)।
मलाई विश्वास गर्नुहोस्, यदि तपाईंले यसलाई प्रयास गर्नुभयो भने तपाईंलाई यो मनपर्नेछ र तपाईं घरमा यी सबै चीजहरू लिनुहुनेछ जुन सबै कियोस्क र सुपरमार्केटमा बेचिन्छ। अन्तमा, empanadas। इम्पानाडास ल्याटिन अमेरिकाको धेरै भागहरूमा बनेको छ, र उत्तरी अर्जेन्टिनाका प्रजातिहरू यहाँ विशेष गरी लोकप्रिय छन्। त्यो उत्तर जुन बोलिभिया र पेरूको धेरै नजिक छ र यसैले यसको भाँडा वा यसको भाषामा पनि ती भागहरू धेरै छन्।
प्रति प्रान्तमा इमान्डानदाको बिभिन्नता छ तर मूल रूपमा ती हुन् मासु वा humita (मकै, मकै), बेक्ड वा फ्राइड। इम्पानाडास प्रेमीहरूले उनीहरूलाई घरै बनाउने मन पराउँछन्, आटा बनाएर र घरमा भर्न, तर ठूला शहरहरूमा परम्परा हराइसकेको छ र आज तपाईं तिनीहरूलाई कुनै पनि स्टोरमा किन्न सक्नुहुन्छ जुन एम्पानेडास र पिज्जा बेचिन्छ।
ब्वेनोस एरर्स एम्पानेडासको विशाल विविधता बेच्ने विशेषता हो जुन भित्रीमा देखिएको छैन: ह्याम र चीज, तरकारी, बेकन र प्लमको साथ, ह्विस्की, कुखुराको साथ र एक विस्तृत एस्टेरा।
अन्तमा, पेयको मामलामा, तपाईं बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न जोडी। यो एक छ जलसेक यर्बा मेट भनिने बोटको पातबाट बनेको पातहरू (पातहरू काट्छन् र भुँइमा राखिन्छ), प्याकेज गरिएको र बेचिन्छ। पछि, प्रत्येक अर्जेन्टिनामा घरमा एक जोडी छ (एक सानो वा ठूलो कन्टेनर, काठ, गिलास, सिरेमिक वा सुक्खा लौका, उदाहरणका लागि) र इन्फ्यूजन चुस्नको लागि हल्का बल्ब।
यर्बा भित्र राखिएको छ, तातो पानी उमाले बिना थपिन्छ र यो पियक्किएको छ, प्राथमिकता स्वस्थ कम्पनीमा किनभने जीवनसाथीको भावना सामाजिक छ, यो साझा छ।
अर्जेन्टिनी सामाजिक रीतिथिति
अर्जेन्टिनीहरु धेरै खुला, मैत्री र मिलनसार मानिसहरु छन्। यदि उनीहरूले तपाईंलाई मन पराउँछन् भने, उनीहरूलाई च्याट गर्न कुनै समस्या हुँदैन, तपाईंलाई उनीहरूको घरमा आमन्त्रित गरेर र तपाईंसँग बाहिर जाँदै। ब्युनोस आयर्स एक धेरै ठुलो शहर हो जुन तालको साथ विश्वको राजधानी भन्दा बढी छ, त्यसैले मानिसहरू बुधवार देखि बाहिर जान्छन्। शहरको धेरै रातको जीवन छ, धेरै बारहरू र रेस्टुरेन्टहरू, तर अर्जेन्टिनीहरू पनि सिनेमा र थिएटर धेरै मन पराउँछन् र राती पनि सडकमा हिंड्छन्।
छिमेकमा साथीहरूको समूह बिहान सबेरै कुरा गर्दै, कुनामा वा चौरमा बसिरहेको देख्नु सामान्य छ। देशको भित्री शहरहरूमा ब्युनोस आयर्स भन्दा बढी सामाजिक जीवन छ किनकि ती मध्ये धेरैजसो, विशेष गरी उत्तरमा, सिएस्टा पवित्र छ त्यसैले दिउँसो कामका घण्टा काटिन्छ।
तब शहरहरू साना पनि छन् र कोही पनि धेरै टाढा बस्दैनन्, तपाईं अर्को दिन बाहिर जान सक्नुहुनेछ जुन अर्को दिन सँधै आराम गर्ने समय हुन्छ।
जबकि विश्वको अन्य भागहरूमा यो दुर्लभ छ कि मान्छे यहाँ घोच्न को लागी एक मित्र को घर मा चेतावनी बिना साथीलाई भेट्न सकीरहेको हुन्छ। तिनीहरूले घण्टी र भोला बज्छन्। कोही अपमानित छैन, कसैले पनि एजेन्डा जाँच गर्नुपर्दैन। सम्म, घरमा भेट गर्नु सामान्य कुरा होहुनसक्छ खान र बाहिर जान, सायद बारबेक्युको लागि। साथीहरू सधैं परिवारको विस्तार हुन्। अर्कोतर्फ, एउटा परिवार जुन सँधै अर्जेन्टिनासँग नजिक हुन्छ।
आइतवारको दिन, उदाहरणका लागि, परिवारलाई खाजाको लागि सँगै भेला हुनु सामान्य कुरा हो। कस्टम एक आप्रवासी शहर को विशिष्ट छ र asado विशिष्ट खाना हो, यद्यपि पास्ता हो। अर्जेन्टिनाले इटालीबाट महत्वपूर्ण आप्रवास प्राप्त गरिसकेका छ त्यसैले इटालेलीहरूका धेरै सन्तानहरू छन् जो उनीहरू पास्ता मन पराउँछन्। जबकि को पुस्ता नाइनहरू राभियोलीको कचौरा वा ससको साथ नूडल्स वरिपरि जम्मा गर्ने प्रचलन लगभग विलुप्त छ। यो धेरै सामान्य छ। अर्को राम्रो सम्मान गरिएको चलन महिनाको २ th तारिखमा gnocchi वा gnocchi खानु हो।
त्यसोभए, अर्जेन्टिनी चलनहरू के हो? असडो, इम्पानेडास, डल्से दे लेचे (यो स्वादको आइसक्रीम प्रयोग गर्न नबिर्सनुहोस्), जोडी (जडीबुटीहरूसँग, मीठो वा कटु, यद्यपि परम्परागत सधैं तीतो हुन्छ), साथीहरूसँग कुराकानी गर्छ, बियर पिउन आउट आउट गर्दछ वा अनन्त कफी कुराकानी जहाँ अर्जेन्टिनीले राजनीतिक विचारहरूको बिचमा संसारलाई समाधान गर्न सक्छ जहाँ स्पष्टतः पेरोनिज्म जहिले पनि हावामा हुन्छन्, जे मन पर्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » अर्जेन्टिना » अर्जेन्टिना भन्सार
पोर्तुगालको ग्यास्ट्रोनोमीको मजा लिनुहोस्